Ngo-Okthobha u-2017, Kuya kufuneka ube unesatifikethi se-SSL esingabonakaliyo | Martech Zone
NgoLwesibini, Agasti 8, 2017 Douglas Karr
Ukugcina phambili kwezokhuseleko kuhlala kulucelomngeni kwi-intanethi. Ukusingathwa kweNimbus kutshanje kudale umzobo oluncedo, obonisa ukubaluleka kokutsha Isiqinisekiso se-SSL esicacileyo inyathelo leemveliso ze-eCommerce, kunye nokubonelela uluhlu lokutshekisha olubanzi ukunceda ngokungahambisi iwebhusayithi yakho kwi-HTTPS. I-infographic, I-SSL engabonakaliyo kunye nendlela yokuhambisa iwebhusayithi yakho kwi-HTTPS ngo-2017 ibonisa imizekelo yokuba kutheni le nyathelo elitsha le-SSL liyimfuneko.
Amanye amabali eHoror SSL ayabandakanya
Iintlola zaseFrance -Google yafumanisa ukuba iarhente kaRhulumente wase-France basebenzisa isatifikethi esikhohlakeleyo seGoogle SSL ukuhlola inani labasebenzisi.
IGithub vs China -Umsebenzisi omnye olawula indawo engezantsi yommandla wophuhliso lokusingathwa kweGithub wanikwa ngempazamo isatifikethi se-SSL sayo yonke idomeyini ligunya lesiqinisekiso saseTshayina.
Amaxhoba eIran -Izatifikethi zedijithali ezenziwe zeDigiNotar zazisetyenziselwa ukuqhekeza iiakhawunti zeGmail ezimalunga nama-300,000 abasebenzisi baseIran ngo-2011.
Ngezi zizathu kunye nezinye, ukuba iwebhusayithi yakho ayinaso isatifikethi se-SSL esingacacanga ngo-Okthobha u-2017, i-Chrome iya kuphawula iwebhusayithi yakho njenge Akukhuselekanga, Ukudimaza abasebenzisi ukuba bangayindwendweli, kwaye ukhuseleko lwewebhusayithi yakho lunokuba semngciphekweni. Ngoku lixesha elifanelekileyo lokuba ukhwele.
Sebenzisa uVavanyo lukaGoogle olungafihli nto kwiSatifikethi seS SSL sakho
Iprojekti yokuqaqamba yeSatifikethi sikaGoogle
Kule minyaka idlulileyo, ngenxa yeziphene kulwakhiwo lwenkqubo yesatifikethi se-HTTPS, izatifikethi kunye nokukhutshwa kwee-CA kubonakalise ukuba sesichengeni sokuyekisa kunye nokuphathwa. Iprojekti yokuqaqambisa isiQinisekiso sikaGoogle ijolise ekukhuseleni inkqubo yokukhutshwa kwesatifikethi ngokubonelela ngesakhelo esivulekileyo sokubeka iliso kunye nokuphicothwa kwezatifikethi ze-HTTPS. UGoogle ukhuthaza zonke ii-CAs ukuba zibhale izatifikethi abazikhuphelayo ekuqinisekiseni esidlangalaleni, kwi-append-kuphela, kwi-logs-proof logs. Kwixesha elizayo, iChannel kunye nezinye iibrawuza zinokuthatha isigqibo sokungazamkeli izatifikethi ezingabhalwanga kwiilogi ezinjalo.